Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi UHarry Maguire Incwadi Yengane Yabantwana Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; "Umuntu Oqinile Onamandla". Indaba yethu ye-Harry Maguire Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye ne-OFF futhi ON-Pitch amaqiniso angakaziwa ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi mayelana nemilenze yakhe ende kanye nesiqu esikhulu se-6 '4', kodwa bambalwa abheka i-Bio yethu kaGarry Maguire ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
Harry Maguire Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Isiqalo sokuphila
UJacob Harry Maguire wazalwa ngosuku lwe-5th ka-Mashi 1993, eSheffield, e-United Kingdom waba ngumndeni wamaRoma Katolika.
Indaba kaBarry Maguire ebuntwaneni iyathakazelisa, uma ingavamile - Sikunikeza indaba yephupho elincane elibusiswa ngethalente elingavamile, ongakaze amshiye ithemba lakhe lokuba ngumdlali webhola lezinyawo. Yena wayenqume ngokuqinile ukwenza amaphupho akhe afezeke futhi izifiso zakhe kwakungeyona nje into edlula.
Ukuphonsa emuva ngasekupheleni kwe-90s, uMaguire wayevame ukubuyela ekhaya nge-tie yakhe eqinisiwe kanye nezikhwama zesikole ezimpunga ezimbozwe odakeni. Esikhundleni sokuhlanzwa, wayezohamba ngqo ensimini noma 'greenfield' ngaphandle kwengane yakhe ebuntwaneni e-Chapel Street eMosborough enebhola ezinyaweni zakhe emdlalweni webhola obizwa ngebhola "Usuku lwami".
Indawo yokudlala yesikole, indawo ye-greenfield ne- 'Usuku lwami' i-tournaments lapho umfowabo uJoe (unyaka omdala nomzuzwana nomqeqeshi uBuxton njengesikhathi sokubhala) edlalwa eceleni kwakhe, namanje unendawo ekhethekile enhliziyweni yakhe.
Ngenhla isithombe sikaHarry (emuva komugqa wesibili ukusuka kwesobunxele) nomfowethu uJoe ngesikhathi se-Immaculate Conception Catholic Primary School ngoMeyi ngoMgqibelo.
Isiteleka esisheshayo eBrunsmeer Athletic samholela eBarnsley kwaze kwaba yiSheffield United. Phakathi nezinsuku zakhe zobusha, uHarry wayenelungelo lokudlala imidlalo eminingi nabadlali abanjengabo Kyle Walker, John Stones noJake Livermore. Wayengumfana osemncane owahamba phakathi kweqembu. Kuyinto efanelekile ukuchaza ukuthi isikhungo sakhe se-6 isikhungo esingu-4-intshi esivela phakathi kwezinsizwa ezintsha lokhu kuhlanganiswe nokuvuthwa okumnandi konyaka wakhe. Ngesikhathi engumfana, uHarry wayebhekene nezinga eliphezulu. Wathatha konke okusemandleni akhe futhi akukho lutho olumkhathazayo.
Ngamazwi akhe ..."Isizathu sokuthi ngikhululekile ebhola ukuthi lapho ngisemncane ngidlala phakathi komphakathi kuze kube yilapho ngingu-16-18 owaphawula isikhathi nginebude bami be-6 '4'. Lesi yisikhathi engagcina ngidlala isikhungo-ubuyele konke ngoba ngangisona sikhulu kunazo zonke, sinezinto ezincane kakhulu futhi ezide kunayo yonke. "
Ngaphezu kwalokho, uHarry wabheka phezulu John Terry futhi Rio Ferdinand. Babenethezekile kakhulu ebhola bese bekhipha ibhola ngemuva. Njengoba uHarry ebeka; "Babengobambiswano obuhle kakhulu lapho ngisakhula." UMaguire wagcwalisa iphupho lakhe lokubuntana elikhulayo eSheffield futhi ezayo ohlelweni lwentsha USheffield United ngaphambi kokuphothula eqenjini lokuqala.
Phakathi nesikhathi sakhe eqenjini lokuqala, uMaguire wayebandakanyekile emakhasini ahlanzekile e-15 phakathi nomkhankaso we-11 / 12 weSheffield United. Imisebenzi yakhe yathola uMdlali weNkathi Nesidlali Esincane seMiklomelo wezinkathi zonyaka. UMaguire uqhubeke ukunqoba isidlali seSikhathi ku-Bramall Lane ku-2012 / 13 naku-2013 / 14. Uphinde wabandakanywa eqenjini le-PFA League Elilodwa lonyaka ngezinyanga ezintathu ezigijima. Lokhu kwaholela e-£ 2.5 million ukuthuthela eHull City. Ithemba lakhe lokuthola ukubizwa ngeNgilandi kwafika ngesikhathi esayina i-Premier League club I-Leicester City. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Harry Maguire Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphila Ubudlelwano
Ngaphambi kwayo yonke indoda enhle, kukhona owesifazane omkhulu, noma kunjalo inkulumo iya. Futhi ngemuva kwawo wonke ama-footballer e-England, kunomfazi othakazelisayo noma intombi. I-central center-back, i-25, ubuhlobo besikhathi eside nabomunye u-Sheffield ozalwa nabo, uFern Hawkins oboniswe ngezansi.
UFern noHarry bebelokhu bebonke ndawonye iminyaka eyisikhombisa. UHarry ube ngumsizi omkhulu wezezimali ezifundweni zakhe ezenzeke ngokuphumelelayo njengoba ephothula izihlonipho.
UFern uthumela izithombe ku-Instagram njalo, ebonisa lezi zibambiswano ndawonye.
Harry Maguire Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphila Komndeni
UHarry uvela esiqenini esithobekile, enesizinda semindeni ephakathi. Awazi lutho ngobaba wakhe ngokungafani nomama wakhe abaningi abakholelwa ukuthi ungumqondisi wezigwegwe.
Ubaba: Ubaba kaHarry Maguire ungumdlali webhola, futhi kungani uHarry adlala eBrunsmeer okwenzeka njengeqembu lakhe elidala. Njengoba uHarry ebeka ..."Yingakho mina nomfowethu safika lapha, sobabili sadlala eqenjini elifanayo"
Umama: UHarry Maguire ufike emanzini ashisayo nomama wakhe ngokuthi uphendukela kanjani eyokuqala e-England.
Esikhathini lapho abadlali abaningi bephezulu basebenzisa imithwalo yemiklamo, ithimba likazwelonke laseNgilandi lomfana omusha uMaguire wahamba ngegciwane ngokufika eqenjini likazwelonke leqembu likaPirates eliphethe ezinye zezimpahla zakhe ebhodini elibi kakhulu! Washiywa ngesihe sabaculi bezokuhlalisana bezenhlalakahle abaye baphahla ukuthi wabheka njengomfundi ekhuphuka emahholo akhe enyuvesi ngesikhathi seSonto Lama-Freshers.
Ekuziphenduleleni kwakhe, uHarry Maguire waqala ukulungisa izinto ngomama wakhe ngokuthi ..."Kwakukhona mayelana no-10 kithi owahamba ngekhwama yebhanki nje nginguye obanjwe ekhamera futhi bonke abanye baphume kabi ngenxa yokuthi ngiyena umfana omusha"
Imibiko bekukhona ukuthi kwakunguJamie Vardy oqale wasebenzisa isikhwama sebhayinini ukuze alethe amabhuki akhe namagada akhe. "Ngabuza amaVards (Jamie Vardy) ukuthi wenzani izibhuzu zakhe futhi wangena esikhwameni sesibhagi ngakho ngathatha izwi lakhe." UMaguire emdlalweni wakhe olandelayo neqembu lakhe lihlehlise umshini wakhe.
Ngemva kokuzilungisa ngokwakhe, Umsizi wezemvelo phansi waphendula ngokuthi ... "Izikhwama zamabhodlela zagcwala amabhukwana ami, ama-shin pads kanye nezinto ezingcolile, engizonikeza umuntu oyisikiti. Okubaluleke nakakhulu ukuthi ngizama konke okusemandleni ami ukugcina izinyawo zami phansi, ngihlale ngithobekile futhi ngivumela ukuthi ikhono lami kanye namasaka omabhodlela akhulume. "
Abafowabo bakaMaguire, uJoe noLaurence, nabo bangabalandeli bebhola. U-Laurence Henry Maguire wazalwa ngo-8th kaFebhuwari 1997 (iminyaka engu-4 encane kunomfowabo, uHarry). UJoe, i-27 njengesikhathi sokubhala (iminyaka emibili kune-Harry) edlala engeyona ilungu (iBoston United). UHarry uyasondelana kakhulu nabafowabo, umama nobaba.
Harry Maguire Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Walcott Fight
Ngokuqondene nokungahambisani kahle, lokhu kuya phezulu nakakhulu. UTheo Walcott ungumliti, isiteleka sezemidlalo somuntu ongenalo lutho kuye. I-Hull City sikaHarry Maguire yakhiwe njengezinsimbi ezimbili zezitini ezihlanganisiwe ndawonye. Akuyona ukulwa okuhle encwadini yomuntu.
Kodwa lokho akuzange kumise kakhulu abanesibindi UWalcott udlala lo muntu onzima futhi ehamba ngezandla ukuze athole isikhulu esiphezulu. Kwakuyena uTheo owaqala lapho ephoqa uMaguire wabe esebhekana uma umuntu omkhulu ephoqa emuva. Ngesibindi ukuphepha kukaWalcott kusindiswe njengoba usompempe engenele ukugwema i-TKO ebulalayo.
Harry Maguire Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Imininingwane yomuntu
Amandla: Maguire unesihawu, ubuciko, enembile, elula, ehlakaniphile futhi ngezinye izikhathi, umculo.
Ukubuthakathaka: UMaguire angase abe nesaba naphezu kokubukeka kwakhe okukhulu. Ngaphezu kwalokho, angase athembe ngokweqile, adabuke futhi abe nesifiso sokubalekela iqiniso.
Okuthandwa ngu-Maguire: Uthanda ukulala.
Okuthandwa ngu-Maguire: Abantu abathi bayazi-konke, begxekwa, okwedlule babuyela ekuqhakambiseni nasekuhlukumezweni kwanoma yiluphi uhlobo.
Ngamafuphi, uHarry Maguire unobungane kakhulu, Uthole enkampanini yabantu abahluke kakhulu. UHarry akazenzi lutho futhi uzimisele njalo ukusiza abanye, ngaphandle kokufuna ukuthola lutho.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu yeHarry Maguire Childhood kanye namaqiniso we-Untold Biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi!.
UDanny Rose Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts